Sarkaal ka tirsan NISA oo si layaab leh uga bad-baaday qarax loogu xiray gaarigiisa (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Sarkaal ka tirsan NISA oo si layaab leh uga bad-baaday qarax loogu xiray gaarigiisa (SAWIRO)
Sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo magaciisa lagu sheegay Ismaaciil Daahir ayaa maanta si dirqi ah kaga bad-baaday qarax miino oo sida la sheegay loogu xiray gaari uu watay.
Sarkaalka qaraxa lala damacsanaa ayaa la sheegayaa xilli uu maraayay agagaarka wadada Kulliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho uu ogaaday in gaarigiisa uu qarax ku xiran yahay, waxaana u suurto gashay inuu si deg deg ah gaariga uga dego.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Ismaaciil Daahir oo ahaa sarkaalkii qaraxa ka bad-baaday uu ogaaday in qarax gaarigiisa loo xiray, kadibne uu si deg deg ah gaariga uga dagay.
“Sarkaal ka tirsan NISA oo lagu magacaabo Ismaaciil Daahir ayaa gaarigiisa qarax loogu soo xiray, balse markii uu ogaaday in qarax uu ku xiran yahay gaarigiisa ayuu si deg deg ah uga degay” Sidaas waxaa yiri C/fitaax Cumar Xalane.
Ciidamo ka tirsan kuwa miino baarista ah oo markii dambe soo gaaray goobta uu gaariga yaallay ayaa ku guuleystay in miinada ku xirneed gaariga ay kala fur-furaan, islamarkaana aanay wax qasaare ah ka dhalan.
Goobta qaraxa lagu fur-furaayay ayaa muddo saacado ah ahayd mid aad u kacsan, inkastoo markii dambe ay xaaladdu noqotay mid caadi ah.